केपी ओलीलाई रामकुमारी झाक्रीको चुनौती ! पुग्ला त उनले बोलेको कुरा ?
काठमाडौँ – नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीकी सचिव रामकुमारी झाँक्रीले पहिलो एक्सन आफ्नै श्रीमानमाथि लिन लागेको खबर छ । उनले आफ्ना श्रीमानको सरुवा गरेर आफू मातहतको मन्त्रालयमा तान्न लागेकी हुन् ।
उनी पहिलो पटक मन्त्री बनेकी छन् । विद्यार्थी राजनीतिबाट नेपालको मुलधारको राजनीतिमा प्रबेश गरेकी झाँक्रीलाई मन्त्री बन्न पार्टी नै फुटाउन परेको छ ।
किन भने उस्तै प्रकृतिको मन्त्रालयको उपसचिव छन् उनको श्रीमान् । झाँक्रीका श्रीमान् पशुपति पुरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका उपसचिव छन्।
नेकपा एमालेमा अन्तरसंघर्ष हुँदादेखि पार्टी गठनसम्म झाँक्रीले माधव नेपाललाई बलियो साथ दिएकी थिइन् । त्यही साथका कारण झाँक्री गाँठि भन्त्रालय पाएकी छन् ।झाँक्री अनेरास्ववियुको अध्यक्षसमेत भएकी थिइन् । उनी अनेरास्ववियुको अध्यक्ष बन्ने पहिलो महिलासमेत हुन् ।
यस अघि उनको स्वास्थ्य र पर्यटन मन्त्री बन्ने चर्चा भएको भएपनि अन्तत उनी शहरी विकास मन्त्री बनेकी हुन् । नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विरोध खतिवडाले स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका छन् ।bमकवानपुरबाट निर्वाचित खतिवडा एकीकृत समाजवादीबाट मन्त्री हुनेमध्ये सबैभन्दा पुराना नेता हुन् ।